UAce Magashule weseka uZuma ngokudelela umthethosisekelo | Scrolla Izindaba
UAce Magashule weseka uZuma ngokudelela umthethosisekelo
INingizimu Afrika isondele kakhulu enkingeni yomthethosisekelo nezepolitiki ngemuva kokuthi uAce Magashule ekhombise ukuthi uyakweseka ukwedelela umthetho weNkantolo yoMthethosisekelo okwenziwa nguJacob Zuma.
NgoLwesithathu, uMagashule – ophethe ifulegi labasekeli baZuma ku-ANC – wenqabile ukulandela imiyalelo yeNkantolo yoMthethosisekelo wathi: “Angiboni ukuthi kukhona okubi akwenzile [uZuma].”
UZuma usabise ngokungawunaki umyalo weNkantolo yoMthethosisekelo omyalela ukuba afakaze phambi kweKhomishini Yokulawulwa Kombuso Yindlanzana, ethi kungcono aye ejele.
Abaxhasi bakhe bezepolitiki okubalwa kubo noMkhonto WeSizwe Military Veteran’s Association basabise ngodlame lomphakathi uma owayengumphathi wabo eboshwa.
UZuma uzethula njengesisulu kuhulumeni kaCyril Ramaphosa ofuna ukumvalele phakathi ejele noma kanjani.
“Bengingakaze ngicabange ukuthi kuzofika isikhathi lapho uhulumeni wentando yeningi eNingizimu Afrika owakhelwe phezu kokubaluleka komthethosisekelo uyoziphatha ngendlela efana ncamashi nohulumeni wobandlululo ekwakheni izinqubo zomthetho ezenzelwe abantu abathile emphakathini,” esho esitatimendeni.
UZuma unengcindezi yokuzivikela emacaleni amaningi enkohlakalo kanye nezinsolo zokuthi wayethola ngaphezu kwezigidi ezi-R4 ngenyanga kwi-State Security Agency.
Ezinye izinsolo zibandakanya ukuphazanyiswa kokuqhutshwa kwezinkampani zombuso okubalwa kuzo u-Eskom, kanye ne-SAA nokuyalela izigidigidi zamarandi ukuxhasa amaphrojekthi abangani bakhe bezepolitiki – izelamani zakwaGupta.
Umyalezo wabakwaZupta uzwakala kakhulu ezinkulungwaneni zamalungu e-ANC kuleli izwe asebizwe kwiKhomishini kaZondo noma aphenywa oKlebe ngokukhwabanisa nenkohlakalo eyenziwa eminyakeni kaZuma.
UMagashule uyilungu eliphakeme kunabo bonke kuleli qembu, elibambene ngezihluthu neqembu likaRamaphosa lomphefumulo we-ANC. UMagashule uvulelwe icala lokukhwabanisa nenkohlakalo yethenda elisuselwa kwizigidi ezingama-R250 ze-asbestos.
Bekhungathekile kuzo zonke izinhlaka, abakwaZupta akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokudukisa umphakathi ngokuthi basekele isimangalo sokuthi uZuma noMagashule bayizisulu zikaRamaphosa.
Futhi uZuma ubonakale enyusa izinga lokushisa kwezepolitiki ngisho nangaphezulu ngoLwesithathu ngesikhathi ekuveza ku-Twitter ukuthi umeme umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema ukuthi azophuza itiye emzini wakhe oseNkandla, wezigidi ezingama-R250.
Umthombo wesithombe: @BDliveSA